२०७४ पौष ८ शनिबार ०७:४८:००
०७२ वैशाख १२, बिहान ११ः५६ बजे
सिंहदरबार परिसर हल्लिन्छ, परिसरमा रहेका घर र रुख हलिन्छन् । हरिशरणलाई जिउ थाम्नै गाह्रो हुन्छ । उभिन गाह्रो हुन्छ । ढुलमुलिन्छन् । ‘भूकम्प भूकम्प’ भन्दै सबै कराउँदै दौडिन थाल्छन् । भूकम्प थामिँदैन । जमिन हल्लिरहन्छ । जमिनका संरचना उही गतिमा हल्लिरहन्छन् ।
हरिशरण दौडिएर रेडियो नेपाल पुग्छन् । रेडियाका सबै कर्मचारी बाहिर बसिरहेका हुन्छन् । कोही फोनमा बोलिरहेका, कोही फोन हान्न प्रयास गरिरहेका । त्यतिबेला रेडियोबाट गीत प्रसारण भइरहेको थियो– आनी छोइङ डोल्माको ‘फूलको आँखामा फूलै संसार...’
“यस्तो बेलामा हामीले रेडियोबाट स्रोतालाई नआत्तिन सूचना दिनुपर्छ । कन्ट्रोल रुममा बस्नुस्, म बोल्छु,” उपलब्ध रेडियो प्राविधिकलाई हरिशरण भन्छन् । प्राविधिकले कन्ट्रोल रुममा बस्न इन्कार गर्छन् । रेडियो नेपालको भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक छ भन्ने उनलाई थाहा थियो । ढल्दैन भन्ने विश्वास थियो ।
उनी ‘मिक्स्चर’को ‘फेडर’ अन गर्छन् र स्टुडियो छिर्छन् । उनको हातमा न समाचारको पेज थियो, न टेबलको कम्प्युटरमा नयाँ बुलेटिन नै । न कुनै कार्यक्रमको स्क्रिप्ट नै थियो ।
हरिशरण बोल्न थाले । भूकम्प गएको सूचना दिन थाले । अनलाइन न्युज पोर्टलहरू हेरेका थिए । भूकम्पको म्याग्नेच्युडबारे उनी अवगत थिए । स्रोत उल्लेख गर्दै उनले स्रोतालाई जानकारी दिए ।
“भूकम्प गएका बेला भाग्नु हुँदैन, सुरक्षित साथ खुला ठाउँमा बस्नुपर्छ,” उनले भने ।
हरिशरणले स्टुडियोबाट स्रोतालाई आफ्नो ठाउँको जानकारी दिन आग्रह गरे । ठाउँ–ठाउँबाट स्रोताले फोन गरे । आफ्नो ठाउँमा भूकम्पले पारेको क्षतिको प्रारम्भिक जानकारी आयो । धरहरा ढलेको खबर आयो । उनले प्रसारण गरे ।
उनले तत्काल राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रमा फोन गरेर जानकारी लिए । अस्पतालमा घाइते र मृतकको भीड रहेको जानकारी दिए । विद्युत् प्राधिकरणमा फोन गरे । नेपाल टेलिकममा फोन गरेर ‘मुलुक प्राकृतिक प्रकोपमा रहेका बेला कति समय निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ ?’ भनेर ‘अन एयर’ प्रतिबद्धता जनाउन लगाए ।
स्क्रिप्ट पढ्ने रेडियो नपालको ‘फर्म्याट’ तोडियो । नागरिक पत्रकारिताको अभ्यास सुरु भयो । रेडियोले जनताकै मुखबाट जनताको सूचना लियो । सरोकारवाला निकायसमक्ष पुर्‍यायो । त्यसको सुरुआत गर्ने श्रेय हरिशरणले पाए । भूकम्पजस्तो परकम्प शक्तिशाली हुँदैन भन्ने थाहा पाएका हरिशरणलाई यही जानकारीले रेडियोको भवन भूकम्पले मच्चिरहेका बेला स्टुडियो छिराएको थियो । जनतासामु उनको ओजिलो आवाज पुर्‍याएको थियो ।
एफएम रेडियोको बोलावाला रहेका बेला कतिले रेडियो नेपालको आवश्यकतामाथि प्रश्नचिन्ह उठाउन थालेका थिए । खर्चिलो भएको भन्दै रेडियो नेपाललाई ‘सेतो हात्ती’ भन्न थालिएको थियो । ठीक त्यही बेला भूकम्पको २४ घण्टे सूचना प्रसारणमा यसले लिएको अग्रताकै कारण धेरैको मुख बन्द भयो । राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बेला राष्ट्रिय प्रसारण माध्यम नै आवश्यक पर्दो रहेछ भन्ने पुष्टि भयो ।
“शनिबारको दिन थियो । मेरो बिदा थियो । म संयोगले त्यो दिन सिंहदरबारभित्र पुगेको थिएँ,” हरिशरण ०७२ वैशाख १२ को दिन सम्झन्छन्, “मलाई अचानक यस्तो बेला हामीले स्रोतालाई आवश्यक जानकारी दिनुपर्छ र यो हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने लाग्यो, अनि म छिनभरमै स्टुडियो पुगेर बोल्न थाले । मसँग त्यो बेला हातमा न कुनै स्क्रिप्ट थियो न दिमागमा डिजाइन नै । आत्तिरहेका नागरिकलाई धैर्य गर्न आग्रह गर्नुपर्छ भन्ने लागेर बोलें ।”
हरिशरणको पत्रकारिता करिअरमा त्यो दिन सधैं मानक बनेर उभिइरहनेछ । उनमा यो आत्मविश्वास यत्तिकै आएको होइन । त्यसको पछाडि लामो कथा छ ।
सेनाको अधिकृत सपना
बुवा स्थानीय राजनीतिज्ञ थिए । नगरकोटस्थित घरछेउमा सेनाको क्याम्प थियो । सैन्य अधिकृतहरू घरमा आउँथे, बुवासँग गफिन्थे । सानैदेखि हरिशरणको खाइलाग्दो, लोभलाग्दो ज्यान देखेर सैन्य अधिकृतहरू ‘बाबु आर्मी अफिसर’ बन्नुपर्छ भन्थे । हरियो टाटेपाटे कमब्याट, काँधमा राइफल, माथिसम्म आउने छालाको बुट अनि हाकिमको रवाफिलो ‘हाईफाई’ । उनलाई पनि रहर लाग्यो । सोचे– जान्छु आर्मीमा, हुन्छु हाकिम र देखाउँछु देश दुनियाँलाई रवाफ ।
समय सधैं आफ्नै हुँदैन । उनको जीवनमा पनि समयले बल्छी हान्यो र बुवालाई लिएर गयो । बुवासँगै घरको मियो भाँचिएको थियो । जेठा छोरा हरिशरणको काँधमा जिम्मेवारीको भारी आयो । भाइ रवि सानै थिए । उनलाई पढाउनु थियो । अभिभावकको जिम्मेवारी बहन गर्नु थियो । उनलाई तत्काल कमाइ हुने काम चाहियो । सेनामा जाने रहर अधुरै रह्यो । हरिशरणले मुटु गाँठो पारेर सपनालाई बलि चढाए । काम खोज्दै काठमाडौंमा भौतारिए । समयले उनलाई प्रदीप उपाध्यायसँग भेटायोे । प्रदीपले म्युजिक नेपालको ‘सेटअप’ गरिरहेका थिए । हरिशरणले त्यहीँ काम गर्न थाले ।
ती नारायण गोपाल
नेपालको पहिलो व्यावसायिक रेकर्डिङ स्टुडियो थियो म्युजिक नेपाल । त्यहाँ हरिशरणले म्युजिक प्रमोसनको काम गर्थे । ब्याकग्राउन्ड भ्वाइस दिन्थे ।
नाराण गोपाल म्युजिक नेपाल आउँथे, गीत रेकर्ड गर्थे । रमाइलो स्वभावका नारायण गोपाललाई स्टुडियोमै चुरोट पिउने छुट थियो । बिहानै आएर उनी सबैलाई जोक भन्थे, हँसाउँथे । काम गर्नका लागि मुड तयार गर्दिन्थे ।
म्युजिक नेपालमा रहेका बेला हरिशरण नारायण गोपालका सांगीतिक सहयोगीजस्तै थिए । त्यसैले नारायण गोपाललाई नजिकबाट चिन्ने मौका पाए । उनलाई नारायण गोपाल ‘क्वालिटी कन्सस’ लाग्थे ।
पाइलट सुनील देउजा नारायण गोपालका फ्यान थिए । उनी बेलाबेला नारण गोपाललाई भेट्न आइरहन्थे । ड्रिंक्समा सौखिन नारायण गोपाललाई सुनील फ्लाइटबाट फर्किंदा ठाउँअनुसारको स्पेसल भन्दै ड्रिंक्स ल्याइदिन्थे । सुनील थोरबहुत गीत पनि लेख्थे । गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने नारायण ठट्टा गर्दै भन्थे, “हेर सुनील ! तिमी मलाई जति नै ड्रिंक्स ल्याऊ तर तिमीले राम्रो गीत नलेखेसम्म म तिम्रो गीत गाउँदिनँ ।” त्यसपछि हाँसोले कोठा गुञ्जायमान हुन्थ्यो । हरिशरणलाई यस्ता थुप्रै क्षण अझै सम्झना आउँछन् ।
नेपाल टेलिभिजन भर्खरभर्खर खुलेको थियो । बेला–बेला टेलिभिजन स्क्रिनमा ‘फुल्चोकीमा चट्याङ परेर हाम्रो प्रसारण अवरुद्ध हुन गएकोमा क्षमाप्रार्थी छौं’ भन्ने वाक्य देखिन्थ्यो । त्यसलाई लक्षित गर्दै नारायण गोपालले म्युजिक नेपालका मालिक र नेपाल टेलिभिजनका परामर्शदाता प्रदीप उपाध्यायलाई भन्थे, “ए प्रदीप ! हामीलाई कति दुःख दिन्छौ ? बेलाबेलामा माफी मागिरहनुभन्दा बरु तीन महिनाका लागि बर्खे बिदा गर्देऊ, हामीलाई पनि बिदा देऊ ।”
०४२ सालमा नारायण गोपाल आफ्नो एल्बम ‘गीतियात्रा’को तयारी गरिरहेका थिए । हरिशरण ‘स्पेस’ खोजिरहेका थिए । नारायण गोपालले हरिशरणलाई प्रमोसनका लागि स्थान दिए । त्यसैले हरिशरण अहिले पनि उनीप्रति कृतज्ञ हुँदै भन्छन्, “मलाई स्थापित गर्नमा नारायण दाइको पनि ठूलो हात छ ।”
हरिशरणको करिअर उकास्न नीर शाहको प्रत्यक्ष हात नभए पनि पृष्ठभूमिमा उनको पनि योगदान छ । “उहाँ नेपालमा टेलिभिजन स्थापना गर्ने व्यक्ति, स्वरको एक अंशमात्रै सुनेर पनि उहाँ व्यक्तिको कण्ठ गुण थाहा पाउनुहुन्थ्यो । उहाँले ‘हरिबाबुको स्वर एकदम राम्रो छ, प्रसारण माध्यमका लागि’ भन्नुहुन्थ्यो । उहाँजस्तो व्यक्तिले गरेको प्रशंसा मात्रै पनि संघर्षका लागि पर्याप्त हुँदो रहेछ,” हरिशरणले सम्झिए । तिनै नीर शाह हुन्, जसले विजयकुमारको एक आग्रहमा नेपाल टेलिभिजनमा ‘टक सो’ चलाउन दिएका थिए । नीर शाह मान्छे परीक्षण गरेर होइन, सुँघेर चिन्छन् भनिन्छ ।
घडीको सुइँको गतिसँगै हरिशरणले आफूलाई ‘अपग्रेड’ गर्दै लगे– प्राविधिक रूपमा पनि, आवाजमा पनि ।
समय पञ्चायतको थियो । एकदलीय व्यवस्था उत्कर्षमा थियो । पञ्चायती व्यवस्थाका हिमायतीबाहेक अरु दल प्रतिबन्धित थिए । कांग्रेस, कम्युनिस्टलगायतका दल भूमिगत थिए । उनीहरूले पञ्चायतविरोधी आन्दोलन छेडिरहेका थिए ।
रेडियो नेपालमा साँझको समाचार वाचक खोजी भयो । समाचार प्रमुख प्रचण्डमान सिंह थिए । उनले म्युजिक नेपालमा बसेर गीत–संगीतको प्रमोसन गरिरहेका हरिशरणको अवाज ‘नोटिस’ गरेका रहेछन् । उनले भनेछन्, “म्युजिक नेपालमा खै के नाम गरेको एउटा केटा छ नि, त्यसको स्वर राम्रो छ, बोलाउनु प¥यो ।”
हरिशरणलाई बोलाहट भयो । उनी रेडियो नेपाल पुगे । त्यो समय रेडियो नेपालमा ‘अन एयर’ हुनु फलामको च्युराझैं थियो । कम्तीमा दुई वर्ष ‘अन एयर’ हुन दिइँदैनथ्यो । सुरुमा जिल्ला बुलेटिन पढ्न दिइन्थ्यो । तर, हरिशरणको आवाज र उनको आत्मविश्वासप्रति प्रचण्डमान ढुक्क देखिए । दुई हप्तामै उनले पहिलो पटक राति ११ बजेको समाचार बुलेटिन पढे ।
पञ्चको शासन थियो । सरकारी रेडियो नेपाल त्यसको छत्रछायाँमा हिँड्थ्यो । दरबारका समाचार मुख्य हुन्थे । दरबारका सदस्यलाई समाचारमै ‘बक्सियो’ लगाउनु पथ्र्यो । दरबारबाट विज्ञप्ति आउँदैछ भनेपछि बिहान सबेरैबाट दरबारको ढोकामा बसेर घण्टौं कुर्नु पथ्र्यो । त्यसलाई ल्याएर सुरुदेखि अन्तिमसम्म हुबहु पाठ गर्नुपथ्र्यो । त्यो समाचार पढ्दा समाचार निर्देशकदेखि रेडियोका कार्यकारी निर्देशकसम्म कन्ट्रोल रुममा बसेर सुन्थे । कदाचित बिग्रियो भने स्टुडियोबाट निस्किएर समाचार कक्षसम्म पुग्दानपुग्दै जागिर गएको वा सरुवा भएको पत्र तयार भइसकेको हुन्थ्यो ।
देशअनुसारको वेश, समयअनुसारको चलन, मालिकअनुसारको खटन । दरबार र सरकारका महत्वूर्ण निर्णयका समाचार आएका दिन प्रचण्डमान आफैं समाचार पढ्न स्टुडियो छिर्थे ।
गीत–संगीतको रंगीन दुनियाँमा रमाइरहेका हरिशरण त्यसरी रेडियो नेपाल पुगे ।
उनलाई हामीले प्रश्न ग¥यौँ, “रंगीन दुनियाँ छोडेर ‘ड्राई’ पेशाका लागि रेडियो नेपाल किन जानुभयो ?”
“साथीहरू पनि मलाई यही प्रश्न गर्थे । तर, म आफूलाई अपग्रेट गर्दै जानु थियो । म्युजिक नेपालमा रहँदा नै म माइकसँग अभ्यस्त भइसकेको थिएँ । मेरो किशोरावस्थाको सपना दोबाटोमै छोडिएपछि मलाई रेडियोबाटै केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्न थालेको थियो,” ०४७ तिर फर्किएर उनी भन्दै थिए, “त्यसअघि नै मैले रेडियोमा तीनपटक स्वर परीक्षा दिइसकेको थिएँ । तर, नाम निस्किएको थिएन । पछि आफैं बोलाए, गएँ । शायद त्यो बेला पनि प्रतिस्पर्धा गराइएको भए के हुन्थ्यो, मलाई थाहा छैन । तर, शायद भाग्यले डोर्याएको थियो, सपना साकार भयो ।”
संगीतको कुनै निश्चित घेरा हुँदैन, भाषा र सीमा हुँदैन । सिर्जनालाई न कसैले छेक्न सक्छ, न अंकुश लगाउन नै । यही बुझे हरिशरणले । त्यसैले त सुगम संगीतका हस्ती स्वरसम्राट नारायण गोपालसँग संगत गरेका हरिशरणले रेडियो नेपालमा युवा पुस्ताको संगीतलाई छिराए ।
“नारायण गोपालसँग काम गरेको मान्छे पप गीतको किन वकालत गर्छ ?” मान्छे प्रश्न गर्थे । तर उनले कसैका कुरा सुनेनन् । युवा पुस्ताले रुचाइरहेको संगीतलाई रेडियो नेपालले ‘प्रवद्र्धन’ गर्नुपर्छ भनिरहे ।
मान्छेभन्दा वजनदार स्वर थियो । एफएम थिएनन् । प्रसारण माध्यम एउटै मात्र । रेडियो नेपालमा काम गर्ने मान्छे सेलिब्रिटी हुन्थे । दिनहुँ चिठ्ठी आउँथे । चिठ्ठीमा स्वरको प्रशंसा गरिएको हुन्थ्यो । भेटौं, बोलौं भन्ने आग्रह हुन्थ्यो । यस्ता सयौं चिठ्ठी आउँथे । भेट्न त के, उत्तर दिन पनि सम्भव हुँदैनथ्यो । केही त्यस्ता फ्यान हुन्थे, जो वर्षौंसम्म पनि चिठ्ठी लेखिरहन्थे ।
एउटी यस्ती फ्यान थिइन्, जसलाई हरिशरणले २० औं वर्षपछि पनि भुल्न सकेका छैनन् । हप्तैपिच्छे चिठ्ठी पठाउँथिन्, प्रशंसामा प्रशस्त शब्द खर्चिन्थिन् ।
“त्यो चिठ्ठी पढ्दा मलाई उनी कुनै आईएनजीओमा काम गर्थिन्जस्तो लाग्थ्यो । पछि कार्यक्रममा पटक–पटक भेट हुँदा तिनै महिला हुन् कि भन्ने धेरै पटक अनुमान गरें । तर, शब्दमा व्यक्तिको सबै अपिरियन्स नआउन पनि सक्छ भनेर मैले उनलाई सोध्न सकिनँ । उनले पनि मलाई भनिनन्,” हरिशरणले सम्झिए ।
मन पराउनु एउटा कुरा, माया गर्नु अर्कै कुरा । खोजेर भेट्नु एउटा कुरा, दोबाटोमा फेला पर्नु अर्कै कुरा । स्रोताका मायावी पत्रले हरिशरणलाई कामप्रति लगाव बढायो होला तर त्यसको मोहमा उनी फसेनन् । सबैलाई उत्तर पठाएनन् । उनको मन छोएका पत्र भए र सम्भव भए उनले तटस्थखाले रचना पठाइदिन्थे । हरिशरणलाई विश्वास गर्ने हो भने उनले आफ्ना स्रोतालाई चिठ्ठी लेखेको यस्तैमात्रै हो ।
मनमोहन अधिकारीको संसद भंग गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा थियो । संसद् भंग गर्ने उनको निर्णयमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् भंग गर्दा त्यसलाई जायज भनेको सर्वोच्चले मनमोहनको मुद्दामा के भन्छ भन्नेमा सर्वत्र चासो थियो ।
फैसला सुन्न अदालतपरिसरमा जम्मा हुनेको भीड ठूलो थियो । जनता फैसला के आयो भनेर सुन्न आतुर थिए । रेडियो नेपालको ‘प्राइम टाइम’को प्रतिक्षित बुलेटिन साँझ ७ बजेको थियो । रेडियो नेपालले सोच्यो– यो समाचार सिधै दिइयो भने यसको असर नकारात्मक पनि पर्न सक्छ, त्यसको जवाफदेही हुन सकिँदैन ।
सूचना त दिनै पर्ने थियो । सल्लाह भयो । समाचार तयार भयो, “आज सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला संविधानका धारा .... आकर्षित हुन्छ ।”
समाचार बज्यो तर कानुनका विद्यार्थी र राजनीतिज्ञबाहेक अरुलाई बुझ्न गाह्रो भयो । सर्वोच्चले संसद् भंग गर्ने मनमोहनको निर्णय गलत भएको फैसला सुनाएको थियो । गिरिजाप्रसादको त्यस्तै मुद्दामा ठीक उल्टो फैसला थियो । मनमोहनको विपक्षमा भएको फैसलाबारे समाचार बजाउँदा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता र एमालेका शुभचिन्तकको आक्रोशको शिकार हुने भयले घुमाउरो शैली अपनाइएको थियो ।
अहिलेको पत्रकारिता– जागिरे मानसिकता
“नेपालमा मिडिया धेरै छन् । विदेशमा मिडिया सञ्चालनका लागि ६–७ वर्षको ‘ब्याकअप’ पुँजी देखाएपछि मात्रै लाइसेन्स दिइन्छ । तर, नेपालमा सानो लगानीमा मिडिया खुलेका छन् । जनशक्ति निकै कम छ । भएका पनि सबै दक्ष छैनन् । फलतः प्रकृतिमा फरक भए पनि विषयवस्तु उस्तै छन्,” हरिशरण भन्छन्, “अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । साउन्ड क्वालिटी राम्रो छैन तर अधिकांशलाई एचडी क्वालिटीमा जान हतार छ । मिडियाको प्रकृतिअनुसार सामग्री दिन सकेका छैनन् । जति नै संख्या थपिए पनि दर्शक÷स्रोताले अझै मीठो स्वाद भएको विषयवस्तु पाउन सकेका छैनन् । यसका लागि लगानी बढाउनुपर्छ । अहिले भएको लगानीमा कम्तिमा २० प्रतिशत बढाउन सकियो भने मात्रै केही प्रगति हुन सक्छ ।”
सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण गर्ने कुरा चलिरहेको छ । सरकारी कर्मचारीमा जागिरे मानसिकता छ । जागिरे मानसिकता भएको व्यक्ति पत्रकार हुन सक्दैन । ढिलासुस्ती छ । मेहनत गर्ने बानी छैन । यस्तो अवस्थाबाट थाकिसकेका छन् हरिशरण ।
“इन्टरनेटका कारण नेपाली मिडिया पनि ग्लोबल हुन थोलका छन् । हामीजस्तो तेस्रो मुलुकका लागि यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, पछिल्लो समय पत्रकारहरू ब्लगर बढी हुन थालेका छन् । सम्पादकीय स्वतन्त्रता भएपछि त्यसको असर उसको संस्थामा देखिन थालेको छ,” हरिशरण भन्छन्, “अनलाइनले प्रिन्टलाई जोखिममा पारेको छ । ब्रोडकास्ट मिडियालाई पनि चुनौती दिइरहेको छ । मोबाइलमा विश्व अटाइसकेको छ । भिजुअलमा मान्छे अभ्यस्त भइसकेको छ । त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ क्रिएटिभ सोचसहितको पत्रकारिताको खाँचो छ ।”
उनी अडियो, भिडियो र टेक्स्टसहितको नयाँ मिडियाको खाँचो औंल्याउँछन्, जुन विश्वभरका व्यक्तिसामु समानरूपमा छिनभरमै पुगोस्, क्रयशक्ति कमजोर भएका व्यक्तिको पहुँचमा पनि सहजै पुगोस्, नेपाली सञ्चारले विश्वमा आफ्नो पहुँच छर्न सकोस् । यही सोचलाई साकार पार्न उनी अहिले लागिपरेका छन् । तर, विस्तृत खुलाएनन् ।
अन्तिममा उनले थपे, “नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्नुपर्छ । स्रोताले स्पष्ट साउन्ड र फ्रिक्वेन्सी पाउनुपर्छ ।”